Shiinaha oo u Digay Mareykanka iyo Korea-da-Waqooyi
Wasiirka arrimaha dibedda Shiinaha ayaa ka digay in Mareykanka iyo Korea-da Waqooyi ay ku dhow yihiin inay isku dhacaan, isaga oo tixraacaya xiisadda sii kordheysa eek a jirta jasiirad u yaalka Korea.
Wang Yi ayaa labada dhinac ugu baaqay inay qaadaan tallaabooyin lagu qaboojinayo xiisadda.
Hase yeeshee, inkasta oo Yi uu ka hadlay wax uu ugu yeeray ‘xasarad soo socota’, ayaa dadka fallanqeeye siyaasadda waxa ay hadalladiisa ku sheegeen kuwa tusmeenaya saameynta Shiinaha uu ku lahaa Korae-da Waqooyi iyo jasiirad u yaalla Korea oo sii yaraaneysa.
Wang Yi, ayaa ku cambaareeyey Pyongyang inay iska indha tireyso cunaqabateenada caalamiga ah iyo mucaaraddada xooggan ee ka dhank ah barnaamijkeeda Nuclear-ka.
Waxa uu Koread-a Waqooyi ugu baaqay in marka hore ay soo geba gebeyso barnaamijkeeda nuclear-ka iyo tijaabooyinka gantaal ee ay sameeneyso, islamarkaana Mareykanka uu joojiyo dhoolu-tuska milatari ee uu ka sameeyo Korae-da Koonfureed.